Angaha ry Jean raha hoe malaza ny frankofonia dia terena hifanaraka amin’izany daholo ny zava-drehetra a ? Sahinareo ny mamafy lainga sy mivarotra ny marina. Mailaka ery anefa ianareo manenjika anay rehefa mba fantatray ny aferafera maizina ataonareo, ka hasehonay ho fanta-bahoaka. Lazainareo fa izahay indray no mpamafy lainga ka dia ataonareo izay hanakombonana ny vavanay amin’ny alalan’ny fomba mamohehatra isan-karazany. Izao anefa dia tsy vitan’ny amidinareo ny tanintsika sy ny harentsika fa hatramin’ny tenintsika aza ity efa nandraisanareo “avansa”. Iza taminareo indray izao ry Jean no nisolelaka sy naka “avansa” tany ho any, ka nahafahan’ny fahitalavitra malaza any Frantsa fa ny tenin’izy no fiteny ofisialy sy hifampiresahana eto amin’ny tanàna ? Aleo ho fanta-bahoaka ry Jean fa 0,57% anie ny malagasy tena bado tsy mahalala ny teny Malagasy ka tsy maintsy mampiasa io tenim-bozongo io eto e ! 15,87% eo ho eo isika no mba mangala-pihinana kely amin’io fa ny 83, 61% dia miteny malagasy soa aman-tsara, ka aza mamadi-dresaka sy mivarotra fanahy a ! Tsy sanatria manenjika fahatany ny vozongo fa kosa manitsy anareo amin’ity fisolelahana efa ho lava ity e !